यौ’न उ’त्ते’जना बढाउन किन गरिन्छ भङ्गे’राको प्रयोग ? – Sadhaiko Khabar
हराएको ३६ वर्षपछि भेटिएको लक्ष्मीनारायणको मूर्ति पहिलेकै मन्दिरमा राखियो
यौ’न उ’त्ते’जना बढाउन किन गरिन्छ भङ्गे’राको प्रयोग ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २१, २०७८ समय: ५:४४:४९
एजेन्सी / महान नाटककार सेक्सपियरले भङ्गेरालाई यौ’न कार्यसँग जोडेका छन् ।
भङ्गेरा त्यस्तो प्राणी हो जसले दै’निक तीन सय पट’कभन्दा बढी यौ’न स’म्पर्क गर्छ । मान्छेको वस्तीसँगै रहने च’ञ्चले सानो चरा भङ्गेरामा आखिर त्यस्तो के श’क्ति छ ?
वैज्ञानिकहरुले यसबारे अनुस’न्धान नग’रेका हो’इनन् । यौ’न’उ’त्तेजना बढाउन भङ्गेरा खा’ने चलन परम्परादेखि अझै पनि छ । भङ्गेरा खाँ’दा यौ’न उ’त्तेजना बढ्ने सोच राख्नेहरु परापूर्व काल देखि नै थिए ।
जडिबुटिका ज्ञाता निकोलस कुलपिपरले भङ्गेराको गि’दीले यौ’न उत्ते’जना बढाउने उल्लेख गरेका छन् । उनको त’र्कलाई आधार मान्दा भङ्गेराको टा’उको खा’नाले यौ’न उ’त्तेजना बढाउँछ । विगत देखि नै यौ’न उ’त्तेजना बढाउन भ’ङ्गेराको टाउ’को खा’नेहरु थि’ए ।
अ’द्भूत यौ’न श’क्ति :
भङ्गेरामा अद्भू’त यौ’न श’क्ति रहेको हुन्छ । पो’थी भङ्गेराले प्र’जननका समयमा भा’लेमाथि प्र’भुत्व ज’माउने गर्छे । सन् २००० मा जोडी एम. जओरले अक्सफोर्ड जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखमा पो’थीले भा’लेमाथि प्रज’जनका बख’त जमा’उने प्रभु’त्वबारे उल्लेख छ ।
तापक्रम र मौसमले पनि भङ्गेराको यौ’न स’म्पर्कको संख्यामा फरक पर्दछ । सबैभन्दा बढी स’म्पर्क प्र’जननको समयमा हुनेगर्छ । भगेराले सरदर दै’निक तीन सय प’टक भन्दा ब’ढी यौ’न स’म्पर्क भने ग’रेकै हुन्छ ।
भङ्गेरामा यौ’न स्व’च्छन्दता हुन्छ । एक अर्काको जो’डीसँग दैनिक सयौं प’टक यौ’न स’म्पर्क ग’र्छन् । पो’थी भ’ङ्गेराले एक वर्षमा दुई देखि तीनपटक सम्म अण्डा पारेर बच्चा को’रल्ने गर्छे । – रि’पोर्टर्स नेपा’लबाट ।